काठमाडौं। नयाँ शक्ति पार्टीका नेता देव लिम्बूले आफूलाई होइन देश विरोधी गतिविधिमा लागेका डा. बाबुराम भट्टराईलाई चाहिँ कारवाही हुनुपर्ने माग गरेका छन्। उनले यस्तो माग राख्दै नयाँ शक्ति पार्टीमा स्पष्टिकरण पत्र बुझाएका छन्। पार्टी संयोजक बाबुराम भट्टराईले भारतको पक्ष लिँदै जातिवादी, साम्प्रदायिक र विखण्डनकारी विचार बोकेको आरोप लगाउँदै आएका लिम्बूलाई स्पष्टिकरण सोधिएको थियो।
उनले लेखेका छन्– ‘ नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि संविधानको अधिकतम उपयोग गर्नु नै आजको आवश्यकता हो, हिजो जातीय कोणबाट उठेका मागहरुलाई बोकेर हिँड्नुको अब औचित्य छैन । संविधानले प्रदान गरेको समावेशी अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजानु नै देश र जनताको आवश्यकता हो र यसैमा सबै जातीय समुदायहरुको पनि हित छ भन्ने अवधारणासाथ नयाँ शक्ति पार्टी गठन भएको हो । यो अवधारणा विपरित पार्टी संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई तथा अन्य केही नेताहरु चलिरहनुभएको देखिँदैछ र जनस्तरमा त्यस्तो गुनासो पनि आइरहेको छ ।’